192.168.8.1 - Lungisa izindawo ezifile ze-WiFi
Lungisa izindawo ezifile ze-WiFi - A. Indawo efile ye-WiFi Ngokuyisisekelo isikhala ngaphakathi kwekhaya lakho, isakhiwo, indawo yokusebenzela, noma ezinye izindawo okulindeleke ukuthi zimbozwe yi-Wi-Fi, kepha akusebenzi lapho - amathuluzi awakwazi ukuxhuma kunethiwekhi. Uma ufaka igajethi endaweni efile — mhlawumbe usebenzisa ithebhulethi noma i-smartphone bese ungena ngaphakathi kwegumbi lapho kunendawo efile - i-Wi-Fi iyema ukusebenza futhi ngeke uthole amasiginali. Imizi eminingi yakhiwe ngaphambi kwe-Wi-Fi -Fi yasungulwa, ngakho-ke zingakhiwa ngezindlela eziphazamisa i-Wi-Fi. Izinto ezinkulu zensimbi ezinjengezindonga zensimbi noma amakhabethe wefayela zingavimba nezimpawu ze-Wi-Fi.
Izindlela Zokulungisa Izindawo Ezifile ze-WiFi
Ngezansi kunamathiphu ambalwa wokumboza ukumbozwa kwe-Wi-Fi yakho.
Hambisa umzila wakho
Uma i-router isekhoneni elilodwa lefulethi lakho, indlu, noma indawo yokusebenza futhi kukhona indawo efile kwelinye ikona lendlu yakho, zama ukuhambisa i-router endaweni entsha emaphakathi enkabeni yefulethi lakho, indlu, noma indawo yokusebenza.
Lungisa i-Antenna yomzila wakho
Qiniseka ukuthi i-antenna yerutha yakho engenantambo iphakeme futhi ikhomba ngokuqonde ngqo. Uma ikhomba ngokuvundlile, ngeke uthole isilinganiso esifanayo sokumbozwa.
I-Spot & Dlulisa ama-Blockades
Uma i-Wi-Fi router yakho igcinwa ngaphandle kwekhabethe lefayela lensimbi elehlisa amandla wesiginali. Zama ukubeka kabusha indawo yakho ngamandla wesiginali aqinile futhi ubone ukuthi lokho kususa indawo efile.
Shintshela kunethiwekhi engenantambo eminyene
Sebenzisa igajethi efana ne-Android noma i-SSIDer ye-Wifi Analyzer Mac noma i-Windows ukuthola inethiwekhi engenantambo egcwele kakhulu yenethiwekhi yakho ye-Wi-Fi, ngokulandelayo ushintshe isethingi ku-router ukunciphisa ukungena kwamanethiwekhi amaningi angenantambo.
Setha i-Wireless Repeater
Kufanele usethe okuphindayo okungenantambo ukunweba ukumbozwa endaweni enkulu uma kungekho namathiphu angenhla asizayo. Lokhu kungabaluleka emahhovisi amakhulu noma ezindlini.
Sebenzisa Isixhumanisi Esinentambo Ukulungisa Izindawo Ezifile ze-WiFi
Ungacabanga nokusetha izintambo ze-inthanethi ze-Ethernet. Isibonelo, uma unentambo enhle engenantambo kulo lonke ikhaya lakho, kepha awukwazi ukubonakala uthola isignali ye-Wi-Fi ngaphakathi kwegumbi lakho lokulala — mhlawumbe unezintambo zezinkukhu zensimbi ngaphakathi kwezindonga. Ungasebenzisa ikhebula le-Ethernet kusuka ku-router uye ekamelweni lakho lokulala, noma ngezixhumi zomugqa wombane uma ungazimisele kangako ukubona izintambo ezizulazulayo ephaseji, bese usetha i-router eyengeziwe engenantambo ngaphakathi kwegumbi. Ngemuva kwalokho uzodinga ukungena kwe-inthanethi okungenantambo ekamelweni langaphambili elingenalutho.
Uma unezindawo ezingenazintambo ezifile kungancika ku-router, ukutholakala kwayo, omakhelwane bakho, ukuthi izindonga zefulethi lakho zakhiwe ngani, ubukhulu bendawo yakho yokumboza, izinhlobo zamagajethi kagesi onawo, nalapho izinto zibekwe khona. Kunokwanele okungadala izinkathazo, kepha isilingo nephutha kuzokusiza ukuthi unciphise inkinga.
Izindawo ezifile ezingenazintambo azinzima ukuthola uma uhamba eduze kwekhaya lakho, ihhovisi noma ifulethi lakho. Ngemuva kokuthi uzitholile, ungazama ngezixazululo eziningi futhi ulungise noma yini edala inkinga.
Izigaba I-Glossary ye-Intanethi Imeyili kwemikhumbi